septembre 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY FAHA 26 SEPTAMBRA 2021
« Miorena ao amin’ny Tompo amin’ny Batisa »
Alahady faha 16 manaraka ny Trinite. Alahady natokana itondrana am-bavaka ireo mpianatra katekomena Andiany Miray sy ny sampanasa Fikarohana sy Fandalinam-Pinoana SFP). Ny Litorjia tamin’ny endriny fahatelo no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana.
Ny diakona Rakotovololona Lova no nitarika ny fotoana.
Ny Salamo 96 :1-10 no novakiana ho fiderana an’Andriamanitra
Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 18 : « Ny feonay rehetra izao », and.1sy 2.
Dera, laza ary voninahitra no natolotra ny Tompo ho setry ny fitiavany ka nahavory indray eto amin’ny tranon’Andriamanitra ny mpianakavin’ny finoana. Nisaorana ny Tompo noho ny fahafahana miombona vavaka amin’ny katekomena Andiany Miray.
Nangatahina ny fanatrehan’ny Fanahy Masina ny fotoana.
Fotoanan’ny ankizy sy ny tanora
Ny Matio 5 : 9 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny hafatra. « Sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak’Andriamanitra. ». Mpirahalahy mpiray tampo i Solofo sy Nary. Nisy fifanolanana teo amin’izy mirahalahy ka tsy nifampiteny intsony izy ireo. Nifindra monina tery ampitan’ny renirano mihitsy ny anankiray vokatr’izany. I Solofo kosa tsy te hahita ny rahalahiny etsy ampita intsony ka naka mpanao trano, mba hanamboatra tamboho avo dia avo hanakonana ilay tananan’i Nary. Tsy nety tamin’ilay mpanao trano izany fihetsik’izy mirahalahy ireto ka nampihavana azy ilay mpandrafitra.
Nihavana tokoa izy ireo ka nitondra hafaliana indray ho an’i Nary sy Solofo ny fampihavanana azy ireo. Tamin’ny alalan’ny Batisa no nampihavanana antsika tamin’Andriamanitra. Isika ihany koa dia tokony hahay hifankatia sy tia fihavanana ary mampihavana ny olona. Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 790:1 « Jesô ô, Sakaiza tsara ».
Nisaorana ny Tompo noho ny fanadiovana nataony tamintsika tamin’ny alalan’ny Batisa. Nangatahina ny Tompo mba hampianatra antsika hahay mifankatia sy tia fihavanana ary hahay hampihavana ny mpifandrafy.
Nohiraina ny tao amin’ny Fihirana Fanampiny 4: “Ry Fanahy ô”, and. 2-3
Nisaorana ny Tompo noho ny fahafahana mandre ny sitrapony. Nangatahina ny Fanahy Masina mba hiasa mandritra ny fandraisana ny hafatry ny Tompo.
Perikopa: Nomery 31: 21-24; Lioka 12: 49-53: I Korintiana 10: 1-5.
Noho ny fangatahan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy dia natao amin’ny endrika fampianarana ny toriteny anio.
Mifantoka amin’ny Batisa izany fampianarana izany.
Ny Batisa dia Sakramenta. Ny Sakramenta dia teny latina ilazana zavatra masina.
Teny na baiko avy amin’i Kristy izy io ary misy marika hita maso.
Raha ny Batisa manokana dia fanadiovana amin’ny alalan’ny rano no marika hita maso amin’izany Sakramenta izany.
Izy io dia misy tandindona ao ami’ny Testamenta Taloha. Ny safo-drano no fanehoana ny Batisa tamin’ny mpianakavin’i Noa.
Ny famorana kosa no tandindon’ny Batisa tamin’i Abrahama sy ny taranany. Teo amin’ny zanak’Israely kosa dia ny fiampitana ny ranomasina mena no tandindon’ny Batisa.
Ny Nomery 31: 21-24 dia mampiseho antsika fa mila voadio ny miaramila avy niantafika izay vao mahazo miditra ao an-toby. Ny fisasana rehetra tany amin’ny Testamenta Taloha dia tandindon’ny Batisa.
Ahazoana fitahiana ny Batisa. Anisan’izany ny famelan-keloka. Rehefa vita Batisa isika dia mitafy an’i Kristy. Amin’izay fotoana izay dia Kristy no hitan’Andriamanitra rehefa mijery antsika Izy. Mitondra Famonjena ho antsika ihany koa ny Batisa ary farany, rehefa vita Batisa isika dia mandray ny Fanahy Masina ho Tombonkase.
Ny Batisa dia atao isam-batan’olona fa tsy mahazo atao faobe.
Miteraka ady hevitra matetika ny hoe « Afaka atao Batisa ve ny zazakely? »
Tsy mifidy taona ny fanaovana Batisa ny olona. Ny famorana ny taranak’i Abrahama dia tandindon’ny Batisa ary raha vao feno valo andro ny zaza dia foramina. Rehefa nita ny ranomasina ny zanak’Israely dia niampita avokoa na zaza vao teraka na olon-dehibe. Araka izany dia natao ho an’ny olona rehetra ny famonjen’Andriamanitra ary tsy mifidy taona ary anisan’izany ny Batisa.
Ny zaza aza no tena mendrika ny handova ny lanitra. Ary ny zaza dia ampiasain’Andriamanitra araka ny Salamo 8: 2 manao hoe: “Avy amin’ny vavan’ny ankizy madinika sy minono no nanorenanao hery noho ny mpandrafy Anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay ta hamaly ratsy”.
Ny fahazazana dia niainan’i Jesoa. Ny Mpianatra dia nanilika ny zaza tsy hanatona ny Tompo ary dia tsy nankasitraka izany fihetsiky ny mpianatra izany Jesoa. Ny fiainam-piangonana dia miantomboka any amin’ny fiandohan’ny fiainan’ny olona iray.
Rehefa atao Batisa ny olon-dehibe dia mila mibebaka, ny zaza kosa dia tsy mila mandalo amin’izany fibebahana izany satria tsy mbola nanota. Na ny olon-dehibe aza dia mila miverina tahaka ny zaza mba hahazoany ny Fanjakan’Andriamanitra. Mitovy amin’ny zaza ny olona rehefa mibebaka.
Aretina apôkalyptika ny covid-19, tsy mifidy taona ny fahafatesana fa asiany avokoa na kely na lehibe.
Aza andrasana ho lehibe ny ankizy fa dia ny mbola kely ny zaza dia mila atao Batisa fa aza andrasana ho viravirain’i satana izy vao atao Batisa.
Baikon’ny Tompo ny fanaovana Batisa ny olona rehetra. Ny Batisa feno dia Batisa amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tsy mandeha tsirairay ireo fa miaraka. Tsy azo atao in-droa ny Batisa, Kristy dia maty indray mandeha ary velona mandrakizay. Raha atao Batisa fanindroany, ny olona iray dia efa miala amin’ny sitrapon’Andriamanitra izy izay ka mihemotra. Tandremo sao dia ataon’ny olona batisa fanindroany ka ampidirany fanahy hafahafa. Tsy fanalana ny loton’ny nofo toy ny tsikoko ny Batisa ka hoe mila ranobe izay vao afaka ny loto. Tsy mila ady hevitra izany hoe ranobe sa ranokely no fanaovana azy.
Mila ampahafantarina ny olona vita Batisa ny fahavitan’izany Batisa izany ahafahany miaina ny fiainana Kristiana na aiza na aiza misy azy.
Tsy mety ny Batisa à distance, Mila mifanatri-tava ny atao Batisa sy ny Mpanao Batisa.
Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarana azo. Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia nangatahina ny famelan-keloka.
Tahorian’ny vavaka fangatahana famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 571: 1.
Mihainoa Ahy, ry taranak’i Jakoba sy izay sisa rehetra amin’ny taranak’Isiraely, izay nobabena hatrany an-kibo sy nentina hatrany am-bohoka: Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, Izaho no hitondra sy hanafaka.
Taorian’ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 4: “ Mamy ny fitianao”, and.2
Ho fanehoana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana fahatelo.
– Tatitry ny mpianatra Katekomena andiany Miray
Ny 13 desambra 2020 no nanomboka ny fianarana. Naseho tamin’ny Mpihevidraharaha sy ny Mpandray izy ireo ny 20 jona. Nandray anjara hatrany tamin’ny fiainan’ny Fiangonana sy ireo hetsika karakarainy ny Katekomena Miray. Ny Fisintonana sy ny fanadinana dia tontosa ny 25 septambra 2021.
– Raharaha avy any ivelany
Tontosaina ny 17 oktobra eny Antsonjombe ny fanompoam-pivavahana fametrahana ny Birao Foibe koa dia mila diakona hifandrimbona amin’ny fanantazana sy ny fanisan-drakitra.
– Raharaha anatiny
Alahady 7 novambra 2021: Fandraisana ny katekomena Andiany Miray ho Mpiray latabatra amin’ny Tompo.
Alahady 3 oktobra * Fotoam-pivavahana hitondrana am-bavaka ny Mpitandrina mianakavy.
* Fisokafan’ny taom-pianarana vaovao ho an’ny Sekoly Alahady
*2 ora sy sasany: fivoriam-be tsy ara-potoana ho an’ny SAMPATI
Sabotsy 9 oktobra, Fiofanan’ny Tomponandraikitra.
Famakiana ny toetry ny vola.
Notontosaina taorian’ny fanompoam-pivavahana anio ny fivorian’ny Mpandray sy ny fanomanam-panahy.
Novakina ny taratasy fisaorana avy amin’ ny Komity ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny FJKM Amparibe Famonjena.
Hafatra avy amin’ny Mpitandrina
Nanentana ny fahavitrihan’ny tsirairay amin’ny fahalalana Soratra Masina ny Mpitandrina ary nanentana ihany koa ny hitondrana am-bavaka sy hanohanana ny Sampanasa Fikarohana sy Fandalinam-pinoana (FFP).
Natao ny hira: FFPM 107:3; FFPM 462:1 nandritra ny rakitra & fanomezana.
Fisaorana noho ny fahazoana fahasoavana sy valim-bavaka
Fisaorana noho ny fahafahan’ny zanaka fanadinana ary mangataka fitondrana am-bavaka azy ireo.
Fanolorana ny rakitra: Nohiraina ny FFPM 445: 3
Asa Vavolombelona: Fahalalana Soratra Masina
« Ringana ny oloko noho ny tsy fisian’ny fahalalana » Hosea 4,6a
« Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalànao ; Eny, hitandrina azy amin’ny foko rehetra Aho »
Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarana mahakasika ny Batisa. Nentina am-bavaka ny fampiharana izany fampianarana.
Nisaorana ny Tompo ny fahavitan’ny fahalalana Soratra Masina.
Nentina am-bavaka ny :
– Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana ary ny Tomponandraikitra rehetra ;
– Toby masina fitaizana ;
– Mpianakavin’ny finoana eto Amparibe Famonjena sy ny zanaka am-pielezana ;
– Komity ny fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha160 taona ;
– Sampana manao fankalazana rehetra ;
– Fanorenana ny trano atsimo ;
– Mpiomana ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo ;
– Sampanasa Fikarohana sy Fandalinam-pinoana (FFP) ;
– Fanompoam-pivavahana fametrahana ny Birao Foibe ;
– Malagasy tratran’ny Kere ;
– Sahirana, tsy salama,azom-pahoriana ;
– Manana hataka manokana ;
– Nanao voady sy raki-pisaorana .
Nentina am-bavaka ihany koa ny areti-mandringana covid-19 mba ho levona.
Ho famaranana ny Vavaka dia natao ny vavaka nampianarin’ny Tompo
Nohiraina ny FFPM 582:3
Niarahana nanonona ny « Tondrozotra 2021 »
Teo am-pamaranana dia nohiraina ny hira « Mialoka Aminao ».
Nandray an-tsoratra: Zanaharitsimba Toky
ALAHADY 19 SEPTAMBRA
“Fa masina ny Tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany” (IKor 3:17b)
Miorena tsara ao amin’ny batisa
“Fa masina ny Tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany” (IKor. 3:17b). 19 septambra 2021, andro voatokana ho Ivon’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha160 taonan’ny Fitandremana Amparibe Famonjena. Nanomboka ny feonjavamaneno fidirana, ary niditra avy amin’ny varavarana aoriana (avaratra) ny Mpitandrina, ny Filohan’ny komity, ireo diakona tompon’anjara. Efa tafapetraka tany ambany avokoa ireo sampana manao fankalazana dia ny Rantsana Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF), ny Sampana Fifohazana (SAFIF), ny Sampana Mpiangaly ZavaManeno (SMZM), ny Sampana Lehilahy Kristiana (SLK) ary ny Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena (STAF). Ny Birao sy Komity 160 taona no niandraikitra ny fotoana. Ny Filoha, Ramananarivo Andry, no nitarika, Rabiazamaholy Léa, mpampianatra K7 no nanao ny fotoana ho an’ny ankizy, Andriambelomanana Andry sy Andrianaly Yves ary Ramahandry Hanitra no nanatanteraka ny vavaka sy ny vakiteny. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofo no nitondra ny hafatra ho amin’ity taom-pankalazana ity.
Azonao henoina ato ny hafatra.
Ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiderana an’Andriamanitra. Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 95 : 1 – 6.
Natao ho hira fiderana ny Ffpm 194 : 1, 4 “Andriananahary ô, endrey ny voninahitrao”.
Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika. “Fisaorana lehibe an’Andriamanitra noho ny fahatrarana ny fankalazana”, izany no tena nasandratry ny mpitarika.
Sitrapon’Andriamanitra : Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izany. Izany dia nalainy tao amin’ny I Jaona 2: 4-29 “Izay manao hoe: Fantatro Izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny … Raha fantatrareo fa marina Izy, dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany”. Nofaranana izany tamin’ny “Sambatra ny mahitsy lalana …”
Natao ny hira Ffpm 417: 1 “Nandao Anao ela aho…” Samy tsy nahatanteraka izany sitrapon’Andriamanitra izany ka nanao ny vavaka fifonana sy fiaikenkeloka. Natao ny hira Ffpm 403 : “Ry Jeso Tompo tsara ô…” ho fiaikenkeloka fa mpanota ary ho fangatahana famelana.
Nanambara ny teny famelankeloka ny mpitarika izay nalaina tao amin’ny Isaia 44 : 22 sy ny Lioka 19 : 10. Rehefa avy nanambara izany ny mpitarika dia niara-nanonana ny mpivavaka “Sambatra ny olona izay voavela ny helony, sy voasarona ny fahotany …” Natao ny hira Ffpm 452 : 1 “Tompo ô, ovay ny foko …” noho ny fandraisana ny famelankeloka, ary rehefa izany dia natao fanekempinoana kristiana laharana voalohany.
“Great is thy faithfulness”, izany no feonkira nataon’ny SMZM rehefa nipetraka ny mpiara mivavaka.
Rabiazamaholy Lea no nitondra izany. Ny tononkiran’ny hira faneva no nentiny hosaintsainina tamin’izany. Nasaina nitsangana ireo ankizy sy tanora, fianakaviamben’ny sekoly alahady. Novakiana ny tononkira, andininy 1, 2, 3 ary ny fiverenana. Nohiraina kosa ny fiverenana fotsiny taorian’izany. Nofaranany tamin’ny vavaka izany.
Rabiazamaholy Léa no nitondra izany. Ny tononkiran’ny hira faneva no nentiny hosaintsainina tamin’izany. Nasaina nitsangana ireo ankizy sy tanora, fianakaviamben’ny Sekoly alahady. Novakiana ny tononkira, andininy 1, 2, 3 ary ny fiverenana. Nohiraina kosa ny fiverenana fotsiny taorian’izany. Nofaranany tamin’ny vavaka izany.
Tatitra asa 160 taona
Ramahandry Nirina no nitondra ny tatitry ny asa vitan’ny komity. Ny desambra 2020 no nijoro ny komity. Ireto manaraka ireto ny asa vitan’izy nanomboka tamin’izay :
03 Janoary 2021 : Fifidianana ny teny faneva : 13 no isan’ny mpandray Anjara
18 Janoary 2021 : Fifidianana ny sary famantarana, 9 no mpandray Anjara
21 Janoary 2021 : fanokafana tamin’ny fombam-piangonana ny fankalazana tamin’ny fotoampivavahana, miaraka amin’ireo sampana enina miara-mankalaza : 20 taona ny RFF, 30 taona kosa ny SLK, SMZM, SAFIF, SVM ary ny STAF
12 Jona : Hetsika vaksiny nahazoana nanaovana ny 1er dose Covisheild
27 Jona 2021 : Notanterahina ny hetsika gasigasy izay nahitana seho an-tsehatra, fifaninanan kabary
21 Jolay 2021 : Fifidianana ny hira faneva
16 hatramin’ny 23 Aogositra 2021 : Tafika masina tany Bevoay, nandray Anjara mavitrika tamin’ny fandehanana tany ireo komity 160 taona.
28 Aogositra 2021 : “Randonnée” teny Ambohijanaka. 224 no isan’ny mpianakavin’ny finoana tonga teny. 6 hatramin’ny 9 km no halavan’ny lalana nandehanana
04 Septambra 2021 : Hetsika vaksiny izay nanaovana ny 2è dose Covishield ary ihany koa ny Jensen. Miisa 246 ireo olona nanatanteraka izany
13 hatramin’ny 19 no hankalazana ny ivon’ny fankalazana ka niaraka tamin’ny Aff izy ireo ny Alatsinainy 13. Fampianarana niaraka tamin’ny mpitandrina Tsimizafy Dinah izy ireo ny talata. Ny 17 dia nisy ny fotoambavaka zoma hariva ary ny 19 no ivon’ny fankalazana.
Ny tohin’ny fankalazana hoy izy dia ireto manaraka ireto :
Oktobra 2021 : Sorapiainan’I Rado : Seho hamerenana indray ny sangan’asan’I Rado, na hira na tononkalo
Novambra 2021 : Garden party sy fanolorana ny tsangambato voalohany
Desambra 2021 : Antsampanahy iarahan’ireo sampan mpitaiza tanora ary famaranana ny fankalazana amin’ny fanolorana ny tsangambato.
Raha misy ny dera sy laza hoy izy ireo dia atolony ho an’Andriamanitra.
Noredonina ny hira faneva taorian’ny tatitra.
Ny Biraom-piangonana Rakotomanana Andry no nanambara ny raharaham-piangonana. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :
Ivelany : 21 Septambra 2021 : hisy ny fotoampivavahanaho tanterahin’ny Ffp eto amin’ny fitandremana Amparibe Famonjena – Ny Université Ravelojaona dia manao fanentanana fa misokatra ny fisoratana anarana – 26 Septambra 2021 dia manao antso ny Paroisse Internationale fa misy ny fotoampivavahana amin’ny teny anglisy.
Anatiny : Ny Zoma sy Sabotsy ho avy izao dia hanao fisintonana ny katekomena mialoha ny fandraisana azy ireo amin’ny fanasan’ny Tompo – Ny rakitra, voady, rfara rakitra sy hafa dia mitontaly Ar 4 091 400 – Teo amin’ny fanambadiana dia misy zanaky ny Fiangonana roa : Razafindralambo Zo sy Rakotomavo Chrystelle, Ramasy Rija sy Rakotoarisoa Simonelle – Misy ny ankatoky ny fandraisana ny 26 Septambra 2021 – Ny SMZM dia hanao ny AG ny 25 Septambra 2021 – Ny VAP dia hanao fahalalana soratra masina ny 26 Septambra 2021
Nanao fanentanana ny mpitandrina taorian’izany. Ny fitsangatsangana izay hanaovana ny sakafo agape ary ny fotoampivavahana ny Talata 21 Septambra no tena nanaovany ny fanentanana.
Maro ireo nanao rakipisaorana sy voady, misy ireo afaka fanandianana, sampan nahatratra ny kobily, ireo nahazo fahasoavana, ny fahatrarana ny faha 15 taona ny fanambadiana, ny nahazo fahasalamana. Ireo hira nagatahan’izy ireo dia ny hira Fanevan’ny RFF, ny Ff 7 : “Tsy hainay ny hangina …”, Ff 12 “ Am-pelatananao …”, Ffpm 460 : 3 “Ny fitondrany soa …”, Ff 10 : 2 “Mibahana ato am-poko …”, Antema 16 “Isaoranay …”.
Ho fanolorana ny rakitra dia natao ny hira Ffpm 275 : 2 “He Anao, ry Tompo soa …”.
Natao ny Ffpm 177 : 1, 2 “Ry Fanahy mpanazava ….” mialoha ny vavaka sy ny famakiana ny teny.
Ny vavaka izay natao dia nangatahana ny Fanahy masina mba hirotsaka handraisana ny teninao.
Ny perikopa anio di any Nomery 8 : 5 – 12, Matio 3 : 5 – 12, Asan’ny Apostoly 8 : 34 – 40.
Ny teny faneva no novoasan’ny mpitandrina Raharijaona Solofo raha nitondra ny hafatra.
Ny teny faneva dia natao ho fiainana. Ary izany dia mandra-pahatongavan’ny teny faneva hafa indray. Izany hoe mandra-pahatongan’ny fankalazana ny faha 165 taonan’ny Fiangonana.
Rehefa dinihina ny teny faneva dia toa mahafinaritra nefa toa manahirana. Teny natao ho an’ireo korintiana izy ity, izay bedy tamin’ny fiainany no nahatonga ity teny ity.
Tsy izany no hiainana azy amin’izao fa tena fanentanana, famporisihina ary fampieritreretana. Manomboka izao dia masina ny tempolin’Andriamanitra.
Raha nazavain’ny mpitandrina ny teny hoe masina dia milaza ireto teny ireto :
Voatokana : ho an’Andriamanitra hianareo izay masina
Voadio : Afaka amin’ny ratsy
Voaavaka : Miavaka amin’izao tontolo izao hianareo
Ny tempolin’Andriamanitra kosa idray dia milaza :
Toerana nisehoan’ Andriamanitra tamin’ny mpanompony
Toerana misy ny tabernakely tany aloha. Nivadika ho trano Fiangonana mihitsy izay taty aoriana
Ho an’ireo olona “Masina” ireo dia voatokana ho an’Andriamanitra. Nambaran’ny mpitandrina moa ny fitiavan’I Jesoa Kristy ny Fiangonana izay mampiseho ny fiahiaNy izany Fiangonana izany. Andriamanitra dia nanokana antsika ho Azy
Arak any voalaza ao amin’ny bokin’Nomery dia misy ny fanokanana ny fanokanana Levita. Fanadiovana azy ireo no resahana ao amin’izany. Manana sata manokana eo anatrehan’Andriamanitra sy ny fiaraha-monina izy. Tsy miaroaro amin’ny zavadrats intsony.
Ny fiananao dia lasa fiainan’olona madio.
Voavaka amin’izao tontolo izao. Efa natokan’Andriamanitra ho Azy hianao. Efa voadio, nesoriny ary napetrany amin’ny toerana hafa.
Nampiafandraisan’ny mpitandrina tamin’ny lohahevitra mandritra ity volana ity moa izany “Mitoera ao amin’ny Tompo amin’ny batisa”. Ny Tanjona amin’ny fiorenana amin’ny batisa di any mba handraisana ny Fanahy masina ary mba ho isan’ny olomboavonjy.
Miantso antsika ny mpitandrina ao anatin’ity fankalazana ity mba hieritreritra, mba ho tena fiainana.
Filipo dia nentin’ny Fanahy masina raha nandeha ho atao batisa. Ataovy batisa ireo izay mbola tsy vita hoy ny mpitandrina sao ho tara loatra.
Ny olondrehetra dia misatroka satroboninahitra ety amin’ity tany ity. Omen’ny Tompo antsika izany araka izay notanterahintsika tety ambonin’ny tany.
Manana Anjara isika rehetra izay manatrika ny fotoana.
Miorena tsara ao amin’ny batisa, fa masina hianao satria tempolin’Andriamanitra.
Nisy ny feonkira mialoha ny vavaka fangatahana ny mpitandrina. Nanao fisaorana ny Tompo ny mpitandrina noho izoa andro izao ary satria efa “Masina” satria efa voadio, voatokana ary noavahana mba ho Azy irery. Nivavaka ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny toerana fanabeazana,ireo kristiana ampielezana ary ireo Fiangonana miara-mandroso.
Nanao vavaka izy mba ho faly mihira fotsiny fa mba hitoetra tsara ao amin’ny Tompo sy hiaina izany. Nivavaka ho an’ny asan’ny komity izy mba ho tontosa ireo tetik’asa izay kinasa.
Nanao hira ny STk taorian’izay ary niroso tamin’ny asa vavolombelona
Fizarana mari-pankasitrahana no natao nandritra ny asa vavolombelona.
Ny teny faneva dia Rabenasolo Muriel no nahazo ny voalohany tamin’ny I Korintiana 3 : 17b
Ny sary famantarana dia Ramananarivo Mparany no nahazo ny voalohany
Ny hira faneva kosa dia Randriamasimanana Hanta no voalohany nanao ny tonony ary Andriambeloson Sitraka Fabrice no nanao ny feony
Nasaina nitsangana ireo sampana 6 sy ireo nandray mari-pankasitrahana dia nentina ambavaka
Natao ny ffpm 753 : 1, 2 “Tiako hiaraka aminao …” mialoha ny tondrozotra sy ny tsodrano.
Natao ny Ffpm 547 : 1, 3 “Ry Jesoa Masoandronay …”
Mpitendry orga : Rabiazamaholy Mahery
Mpaka sary : Rabemananoro Jonathan
Nanao ny tatitra : Robel Hanitra
Miorena ao amin’ny Tompo amin’ny batisa. Mbola izany lohahevitra izany no banjinina amin’izao Alahadimbokatry ny Asa fitoriana ny filanzantsara izao. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nitondrany ny fotoana. Rtoa Andrianary Mbolamasoandro no nitarika ny fotoana, Rtoa Rakotoarisoa Hiratra no nanao ny vavaka, Rtoa Rasolofo Joceline sy Atoa Rakotondramboa Andriniaina no nanao ny vakiteny.
Taorian’ny feonjava-maneno fidirana dia noredonina ny hira faneva K160. Novakiana ny Salamo 98 : 1-6 ho fiderana an’Andriamanitra. Natao ny hira Ffpm 16 ary natao ny vavaka fisaorana sy fiderana.
Nambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Rom 10 :13-15/II Tim 4 :2 ary rehefa izany dia natao ny ffpm 639 : 1, 2.
Noho ny tsy fahantanterahina izany sitrapon’Andriamanitra izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika ary natao ny hira Ffpm 403. Nambara ny teny famelankeloka izay nalaina tao amin’ny Heb 9 :22/Asa 5 :31.
Natao ny hira Ffpm 643 : 2, 3 ary ho fanavaozana ny fanolorantena dia niara-nanonona ny fanekempinoana laharana faharoa ny mpianakavin’ny finoana.
Niroso avy hatrany tamin’ny tatitr’asan’ny sampana ka Atoa Rabeson Fidy no nanatanteraka izany. Anisan’ny nataony tatitra moa ny fandraisana anjara tamin’ny fitoriana ny filazantsara tany Bevoay. Taorian’ny tatitra dia nasaina nitsangana ny mpivavaka rehetra ka niaraka nanao ny hira FF 47 niaraka tamin’ny AFF.
Nanambara ny raharampiangonana Atoa Razafindrabe John Bam.
Rehefa izay dia niroso tamin’ny rakitrasy fanomezana ary natao ho fanolorana rakitra ny hira HF 6 : 1.
Natao ny FF 6 : 1 ho fiomanana amin’ny vavaka sy vakiteny. Ny perikopa anio dia ny Salamo 51 : 1 – 12, Marka 16 : 14- 18, 1Petera 3 : 18- 22.
Alahady faharoa iainanna ny lohahevitra fitaizam-panahy : »Miorena ao amin’ny Tompo amin’ny Batisa », misy hifandraisany amin’ny filanzatsara amin’ny maha Alahadin’ny AFF anio.
Ny Filazantsara dia fanambarana vaovao mahafaly, hafatra tsara mahafinaritra mahafaly. Ny nampiasana ny vaovao mahafaly (euaggelion) dia efa hatramin’ny tontolo Grika izay ilazana ny valisoa omena ny mpitondra hafatra, izay avy nandeha tongotra, na nitaingin-tsoavaly, na nandeha Sambo. Ohatra, mandeha manambara ny fahaterahan’ny handova ny fanjakana, fahatongavan’ny Emperora vaovao (Emperora=Kurios= Kristy) eo amin’ny fanjakana antenaina hitondra fandrosoana sy fandriampahalemana. Tamin’ny vanim-potoana « Pré-Pascal », i Jesoa dia nitory fibebahana sy ny fahatongavan’ny fanjakan’ny lanitra, ary ny Post-Pascal nanombohana ny fitoriana ny filazantsara an’Ilay nitsangana tamin’ny maty. Koa ao anatin’ny hevitry ny filazantsara dia maneho fibebahana, fanirahana ary fampaherezana ny olombelona. Hitantsika ireo ao anatin’ny Teksta angalana ny hafatra dia ny Marka 16 :14-18. Hafatra telo no azo azo zaraina sy hifampaherezana ao anatin’izany.
1-Minoa ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy : And 14, 16b
Asaina mino isika satria ahitana endrika tsi-finoana eto.
Endrika 1 : ny tsi-finoan’ny mpianatr’i Jesoa. And 14
Misy mpianatra efa nisehoana mialoha (And9,12) ireo samy nitory tamin’ny mpianatra fa efa nitsangana i Jesoa, tena vaovao mahafaly izany manoloana ny fahoriana niainan’izy ireo tamin’ny fahafatesan’ny Tompo. Saingy tsy nety nino ireo satria mafy fo hoy i Marka « Ary Izy nanome tsiny azy noho ny tsi-finoany sy ny hamafin’ny fony ».
Endrika 2 : ny tsi-finoan’ny olona hitoriana And 16b
Nanomboka teo amin’ny vanim-potoana « Post-pascal » izay itoriana ny Filazantsaran’Ilay nitsangana tamin’ny maty, dia mizara roa ny olombelona eo imason’Andriamanitra : ny mino sy ny tsy mino. Amin’Andriamanitra tsy misy elanelana. Ireo tsy mino dia izay manidy ny fony tsy handairan’ny finoana ny filazantsara. Vokatra ratsy miandry azy ireo dia hiharan’ny fanamelohan’Andriamanitra. Ary hibaribary izany amin’ny andro fitsarana, fa ho very mandrakizy ireo tsy mino. Araka ny Jaona3 :36 « Fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy. ». Ny filazantsara anefa efa toriana amintsika aty am-piangonana, eny amin’ny tambazotran-tserasera, eny an-dalam-be, sns
Ry havana, isika koa tahaka ireo mpianatra, tsy miorina tsara ny fiainana ny filazantsara. Miovaova araka ny trangam-piainana eny, rehefa tsy mety ny atao dia iny isika mivily lalàna. Ary misy aza moa, tonga mivavaka fa mbola manidy fo tsy mandray filazantsara ka mbola miaina anaty fahotana tanteraka. Tampenan’i Satana amin’ny fahoriana sy ny fahasahiranana ny masom-panahy tsy hitraka hibanjina ny Tompo. Ho antsika indrindra izao hafatra izao, minoa ny Filazantsara ary raiso ho Tompo sy Mpamonjy anao Ilay niaritra ny hazo fijaliana toerana tokony nisy ahy sy ianao. Ndeha hitalaho ny famindrampon’Andriamanitra, hamela ny helontsika ary handraisantsika ny famelan-keloka ahatonga antsika ho olom-baovao. Ny Salamo faha 51 Perikopa anio mitaona antsika amin’izany fivalozana amin’ny Andriamanitra ahazoana famelan-keloka Aminy. Tanteraho izany ry havana, ataovy Tomponao sy Mpamonjinao i Jesoa Kristy. Androany miteny aminao ny Tompo : « Aza ho isan’izay tsy mino, fa minoa » Jao20 :27.
2-Torio ny filazantsaran’i Jesoa Kristy : And 15-16a
Rehefa avy nisehoan’i Jesoa ny mpianatra dia nanamafy izy niseho tamin’ny mpianatra 11 lahy ary naniraka azy ireo, amin’Ilay iraka lehibe indrindra omen’ny Tompo « Mandehana, mitoria ny Filazantsara… »
Foto-kevitra telo no raisintsika ao anatin’izany :
-Torio ny filazantsara amin’ny toerana rehetra : And 15 « Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo » ny teny fototra manambara hoe « Eny am-pandehanana » misy fahasamifahana ireo. Ny voalohany dia toa manambara hetsika afaka miandry, fa ny faharoa dia milaza fa amin’ny fotoana rehetra, eny am-pandehanana amin’ny fiainana andavanandro no mitory isika, atao fiianana ny fitoriana. Koa asehoy amin’ny fihetsika fa Zanak’Andriamanitra Ianao, asehoy amin’ny toetra ny maha Kristiana anao, ary ambarao amin’ny vava ny famonjena nataon’i Jesoa Kristy efa iainanao.
Ny tanjon’ny fitoriana dia manova ny fahizian’ny olona itoriana. Fanovana ireo fomba amam-panao, ny volintsaina, ny fady tsy mifanaraka amin’ny Soratra Masina. Manafaka ny olona amin’ireo satria ny Filazantsara dia herin’Andriamanitra ho famonjena izay very.
–Torio ny filazantsara amin’izao herinao izao : « Mandehana any amin’izao tontolo izao, ianareo »
Voafaritra eto fa ny rehetra mpianatr’i Jesoa no asaina mitory. Isika no iantefan’ny iraka. Koa isika dia IRAKA ‘Andriamanitra avokoa. Ary ny Fiangonana atao hoe Fiangonana misionera. Dia mety sadaikatra isika anao hoe ahoana no ahavitana izany ?
Hanintona ny saintsika aho fa mpianatra tsy vontom-pinoana no nirahina. Ary raha hiandry olona ho tonga lafatra dia tsy ho tanteraka velively ny fitoriana. Dia ireto mpianatra nandeha fa ny fampanantenana ataon’i Jesoa no fototra ; izany hoe miaraka amin’i Jesoa.
Nandeha na dia mafy aza ny toe-zava-misy teo amin’ny toerana nanirahana satria i Jodia sy i Galilia tsy nilamina ny ara-tsosialy sy ara-pivavahana. Nanjaka be ny Empira Romana niteraka faharatsiana ara-pivavahana. Ary mady dia many ny zava-misy ara-ekonomika ho an’ireo tantsaha kely maro an’isa. Nipoitra ihany koa ny hetsika fanoherana ny « Mesia » tao Paletsina tamin’ny taona 66. Kanefa izany tontolo izany nahavitana nanangana sy nampivoatra ary nampiroborobo ny Fiangonana Kristiana voalohany. Dia toy ireo ihany koa ny tontolo misy ny firenentsika, fanompoam-tsampy etsy sy eroa, karazam-pivavahana tsy Kristian amaro, mangony fotsiny ny fahasahiran’ny vahoaka izay mitady mpamonjy eo noho eo.
Mandehana ry havana, torio ny filazantsara dieny izao mba tsy hanenena. Manàna fo onena ireo izay mbola very, fa tian’Andriamanitra ho tonga ami’ny fibebahana avokoa ny olombelona rehetra. Ndeha hizakazaka tahaka ilay mpitondra hafatra (tontolo Grika tany aloha), hitondra ny vaovao mahafaly an’Ilay Mpanjaka Mpamonjy izao tontolo izao, mitondra fiainam-baovao sy fiadanana ary fiainanana mandrakizay ho antsika olombelona.
–Torio ny filazantsara ary araho asa izany : « izay mino sy atao Batisa no hovonjena » And 16a
Misy asa takiana amin’ny Mpitory : mahatonga ny olona hino, ary manao batisa ny mino.
Izay mandre ny Toritenin’izy ireo ka tonga amin’ny finoana no omena ny mariky ny maha zanak’Andriamanitra dia ny Batisa izany. Ary satria marika iny, dia iny ihany koa no ahafantaran’ny Tompo ny Azy. Amin’izay raha tonga amin’ny tsi-fisalasalana izay efa nahazo ny marika dia mba azo averina amin’ny finoana tahaka ny nataon’i Jesoa tamin’ny mpianatra. Manampy an’izany, ny maha-zava-dehibe ny Batisa Kristiana tarafina amin’ny ireo tandindona tany amin’ny fanekena taloha araka ny I Pet 3 :21-22 dia, mamonjy ny Batisa.
Ry havana malala, andeha hampiharintsika izany ka andeha ho entina eo amin’ny Tompo ny olona nitoriana, ataovy izay ahavita Batisa azy ireny. Tanteraho ary ny fanompoanao.
3-Matokia ny herin’Andriamanitra miasa amin’ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy : And 17-18
Eto dia nomen’ny Tompo fahefana hahavita famantarana maro ny mpianatra sy ny mino. Ny teny hoe famantarana dia asa mahagaga manambara sy maneho ny asa mesianika. Fahefana zany hahavita zavatra amin’ny fanohizana ny asan’ny Tompo ety an-tany mandra-piveriny. Ny anton’izany, dia ny hitarika ny mino hivelona sy ho velona amin’ny finoana mandrakariva. Karazana maro ireo famantarana, ohatra, ny menarana midika fahavalo eny am-pandehanana ; ny zava-mahafaty : rehefa misy fanamelohana fa rà izao tontolo izao aza manameloka dia hovonjena ny mpino, omen’ny Tompo hery no enti-manasitrana, sns.
Ireo dia toky sy fampaherezana ary fampiorenam-pinoana ho an’ny mpianatra fa tsy mandeha irery izy ireo fa eo anivony mandrakariva i Jesoa. Manamafy izany, ilay teny nampaherezan’ny Tompo ny mpianatra hoe « …Izay mino Ahy ny asa ataoko no atoany koa ; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin’ny Ray (Jao14 :12s)
Ry havako malala, hamafiso ny fihaonana sy fifaneraserana amin’i Jesoa velona fa izay no mahatonga ho olom-baovao sy fiainana mihavao, minoa ny herin’Andriamanitra manampy anao ao anatin’izany.
Nohiraina ny hira FFPM 753 :2 teo am-pitsangana ho fanoloran-tena ataon’ny Fiangonana.
Ry havana, maniraka ny Fiangonana i Jesoa Kristy hitory. Lehibe ny andraikitra ho an’ny olom-boaantson’ny Tompo, ny fanatanterahana izany no antom-pisian’ny fiangonana. Koa vonona va ianao ?
Sahia manoa zava-dehibe ho an’Andriamanitra, tanteraha amin’ny finoana izany, mandehana amin’izao herinao izao fa IRAKA ianao, matokia fa ny fombàna, ny fitahiana, ny fahombiazana dia an’Andriamanitra.
Ho Azy irery ny Voninahitra, ho an’ny Fiangonana ny finoana ny Filazantsara. Amen !
Nisy feonjavamaneno fohy taorian’ny toriteny ary nanao ny vavaka fangataham-pitahiana ny mpitarika izay nofaranana tamin’ny Rainay izay any an-danitra.
Nanao anjara hira « Ray ô, inty » ny STAF ary niroso avy hatrany tamin’ny asa vavolombelona
Nisy batisa moa tamin’ny asa vavolombelona. Zaza roa no nanatanteraka izany dia RALAMBOMANANA Ennrick Emmanuel sy RALAMBOTIANA Nathalia Ambinintsou.
Natao ny hira Ffpm 178 : 1, 3 mialoha ny tsodrano sy tondrozotra ary ny hira Ff 1 no namaranana ny fotoana.
Mbola nisy moa ny asa fampaherezana taorian’ny fotoampivavahana.